Thursday 11th July 2019 13:09:39 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Dowladda Soomnaaliya ayaa u muuqata inay u hoggaansameyso cadaadiska xooggan ee caalamiga ah ee la saarayo ee ku aaddan muranka badda ee kala dhaxeeya dalka Kenya, sida ay werinayaan warbaahinta caalamiga ah.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in Soomaaliya ay hadda u muuqato inay fursad cusub siineyso xal ka baxsan maxkamadda oo kiiskan laga gaaro, taasi oo ah arrin ay muddo diidaneyd.
Wargeyska Business Week ayaa qoray inuu jiro kulan qarsoodi ah oo dhex maray wakiilo ka socda Nairobi iyo Muqdisho, kaasi oo ay dhex-dhexaadisay dowladda Mareykanka, kana dhacay New York.
Sidoo kale, wargeyska Daily Nation ee kasoo baxay Nairobi ayaa qoray inay jiraan dadaallo uu wado ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ay gadaal ka riixayaan Mareykanka iyo Britain, kuwaasi oo muddo si hoose u socday balse soo shaac baxay toddobaadkan.
Taleefishinka CGTN ee Shiinaha ayaa isna warbixin uu qoray ku sheegay in qorshaha Abiy Ahmed uu yahay in dib loo dhigo kiiska maxkamadda ilaa waqti cayiman si waqti loo siiyo wada-hadallada.
Qorshahan ayaa u muuqda mid Soomaaliya laga iibin karo maadaama aysan si buuxda kiiska maxkamadda uga wada baxeyn, oo ay kaliya dib u dhigeyso inta wada-hadallada socdaan, waana midd hadda si xooggan diiradda loo saarayo.
Abiy Ahmed ayaa qorsheeyey inay 13-ka bishan kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta. Kulankan ayaan waxaa weli xaqiijin labada waddan.
Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal kooban oo uu soo saaray laba maalin ka hor ku beeniyey "inuu is-beddelay mowqifkii Soomaaliya ee ku aadanaa ee kiiska maxkamadda caalamiga ah ee ICJ.”
Qoraalkan oo sidoo kale ay la socotay hanjabaad ka dhan ah ilo-wareedyada warkan shaaciyey ayaa u muuqda mid hab xeeladeysan loo qoray, oo marka aad si u fiiriso shacabka u niyad dhisay, haddana aan wax jawaab ah ka bixin su’aalaha taagan.
Tusaale qoraalka ma beenin inay kulmaan Farmaajo iyo Uhuru, ma beenin in wada-hadal dhacayo oo kiiska badda laga wada-hadlayo, iyo dadaallada uu wado Abiy Ahmed midna.
Marka la yiraahdo "isma beddelin mowqifkii Soomaaliya ee kiiska maxkamadda” waa run oo ilaa si rasmi ah dowladda ugu dhowaaqdo inay ka laabatay kiiska, isma beddeli, hase yeeshee wixii intaas ka horreeyey oo dhan qoraalka ma beenin oo ay ugu weyn tahay wada-hadallada.
Villa Somalia waxaa laga sugayaa jawaab intaas ka faah-faahsan.